Dowladda Uganda oo qiratay in Alshabaab ciidamo uga haystaan Soomaaliya. – Radio Daljir
Dowladda Uganda oo qiratay in Alshabaab ciidamo uga haystaan Soomaaliya.
Seteembar 4, 2016 3:34 b 0
Taliyaha ugu sareeya ciidanka dalka Uganda Jeneral Katuba Wamaala oo Wareysi siiyay Wargeys ka soo baxa Dalka Uganda ayaa sheegay in Askari ka tirsan Ciidamada Uganda ay Gacanta ku hayaan Al-shabaab islamarkaana lagu qabsaday Dagaalkii ka dhacay Degaanka Janaale ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Jeneral Katuba Wamaala ayaa sheegay in weerarkaasi Janaale dowladda Uganda looga dilay 19 askari oo qeyb ka ahaa ciidanka Midowga Afrika ee howlgalka kawada gudaha dalka Soomaaliyeed.
Dhanka kalena taliyaha ayaa waxa uu qiray markii ugu horeysey in askari gacanta ugu jira Al-Shabaab ay ku qabteen weerarkii Jannaale , islamarkaana dowladda Uganda ay u ciqaabtey taliyeyaasha ciidanka Uganda ee deegaanka Janaale heystay.
Afhayeenka Ciidanka dowladda Uganda Kolonel Paddy Ankunda ayaa sheegay in ay tuhunsan yihiin in uu nool yahay askariga ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan , waxuuna sheegay in maalin maalmaha ka mid ah ay ku raja weyn yihiin in uu dib xoriyadiisa u helo.
DHEGEYSO-Shuban-biyood ka dilaacay deegaamo hoosyimaada Isku-shuban.